I-China Mineral Fiber Ceiling BC005 kumzi mveliso kunye nabavelisi | Beihua
1. Iziphumo ezigqwesileyo zokuhlobisa.
2. Ukusebenza kokufudumeza kobushushu. Ukuqhutywa kweshushu kwe-paneral ye-mineral efunxa izandi iphantsi kakhulu, kwaye iyinto efanelekileyo yokufaka insulin, enokwenza igumbi lifudumale ebusika kwaye lipholile ehlotyeni, kwaye longa amandla ngokufanelekileyo kubasebenzisi.
3. Ukuthathwa kwesandi kunye nokunciphisa ingxolo. Eyona nto ingafunekiyo yebhodi yokucocwa kwesandi esine-mineral i-fiber kunye ne-fiber esemgangathweni efanelekileyo ye-mineral ye-mineral kunye nobunzima be-250-300Kg / m3. Ke, bunobutyebi bokungena kwemikroskopu, enokufumana ngokufanelekileyo amaza esandi kwaye inciphise ukubonakaliswa kwesandi, ngaloo ndlela kuphuculwe umgangatho wesandi esingaphakathi kunye nokunciphisa ingxolo.
4. Ukhuseleko kunye nokuthintela umlilo.
5. Ukhuseleko lwendalo esingqongileyo. Ibhodi efunxa ingxolo e-mineral ayina izinto eziyingozi emzimbeni womntu.
6. Ubungqina bokunyibilika kunye nokufakelwa insulin Ngenxa yokuba ibhodi efunxa isandi esinoxolo kumaminerali iqulathe inani elikhulu le micropores kunye nendawo engaphezulu yomphezulu ilingene, inokufumana kwaye ikhuphe iimolekyuli zamanzi emoyeni kwaye zilungelelanise umswakama womoya ongaphakathi.
7. Ukusika okulula kunye nomhlobiso olula. Ibhodi efunxa isandi esinoboya obunamaminerali iyakwazi ukubonwa, ukubethelwa, ukucwangciswa, kunye nokudityaniswa, kwaye kunokusikwa ngommese odongeni jikelele, ke akukho ngxolo xa usika. Ineendlela ezahlukeneyo zokuphakamisa njengokubambelela kuflat, ukufaka ukunamathela, isakhelo esifihliweyo, isakhelo esifihliweyo njl.njl. Okunokudibanisa iziphumo zokuhombisa kwezitayile zobugcisa ezahlukeneyo.
8. Inkqubo emanzi, ugqibezele yonke inkqubo ngokudonsa, ukukopisha i-Fourdrinier, ukuphuma komzimba, ukubetha, ukomisa, ukutshiza, ukutshiza, ukugqiba kunye nezinye iinkqubo.
9. Ngexesha lokuhamba kwebhodi yezimbiwa zoboya, nikela ingqalelo ukuthembeka kwephakheji, ubungqina bomswakama kunye nobungqina bemvula, ukuthintela ibhodi ingamanzi, okuya kuchaphazela ukusebenza kofakelo.
10. Ibhodi yoboya yamaminerali kufuneka ilayishwe kancinci kwaye ilayishwe ngexesha lokuphatha. Ibhodi kufuneka ibekwe flat, hayi ngokuthe nkqo, ukunqanda ukonakala kwekona.
Edlulileyo: I-Mineral Fibre Ceiling BH002
Okulandelayo: Inkqubo ye-White Ceiling Grid